Iyo Big Data iri kushandura HR - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Iko Big Data iri kushandura HR
Mufananidzo ne Marvin Meyer on Unsplash
Big data inowanzobatanidzwa nekugadzirisa maindasitiri maitiro uye kuita basa rekutsvagisa. Zvisinei, iyo World Economic Forum inotaura kuti data hombe richaramba richienda kubva kusimba-kuenda-kusimba. Ikozvino, nyanzvi dziri kufungidzira kuti panosvika 2025, mazana mana eexabytes edata achagadzirwa pasi rose - zvakaenzana ne400 maDVD. Ndiyo data rakawanda, iro, rinosimbisawo kuti kureba kwekushandisa kwe big data inogona kusundidzirwa.
HR maitiro, kunyanya, anofungidzirwa kuve chinhu chikuru chinotevera kana zvasvika kune big data chimurenga. Izvi zvinonyanya kukosha kufunga HR inosanganisira mabasa akasiyana siyana - kubva pakutsvaga kusvika pakudzidziswa. Kana ese aya mabasa akatariswa, kusashanda kweHR maitiro kunogona kudyira makambani nguva yakawanda uye manpower anogona kushandiswa zvine pundutso. Izvi ndizvo zvinoita kusimuka kwe big data muHR inobatsira kwazvo, sezvo iine mukana wekupa rutsigiro pane ese akasiyana mabasa.
Kuchengetedza uye kushambadzira
Yemazuva ano yemakwikwi emabasa musika zvinoreva kuti makambani ese uye vanyoreri vari kuita zvakanyanya nemaune nekuvhura. Nepo kambani yega yega ichivavarira kukwezva tarenda rakanakisa rinobvira, vamiriri ava vari kukwikwidzana nemikana yakanakisa yavanowana.
Naizvozvo, kushambadzira kunotora chikamu chikuru mukukwezva vanyoreri. Kuti uwane vakanyanya kukwikwidza, vashandi veHR vanofanirwa kunzwisisa zvakanakira kushambadzira, ndiko kupi big data nhanho mukati. Inogona kunyanya kubatsira kana uchizadza mabasa ekutanga anoda tsvakurudzo yakawanda, seaya ari muindasitiri yehunyanzvi. Yoss inosimbisa kukosha kwekugona uye mhando kana zvasvika pakutsvaga hunyanzvi hunyanzvi se kukodha uye Software programming. Nekuda kwehunyanzvi hwavo hwega, kutarisirwa kwakanyanya kunofanirwa kutorwa kana uchitsvaga rudzi urwu rwetarenda.
Panguva imwe, big data zvakare inobvumira HR kusanganisa ruzivo rwevanonyorera kuti vagadzire chimiro chevavanoda, izvo zvinobatsira kudzikisira kutsvaga kuti vasvike zvakananga kune tarisiro. HR Dive inotsanangura kuti kusarudzika kwakakoshawo mukuita kwekushandisa, nemaemail uye mameseji anopa nzira yekuti vanyoreri vanzwe kugamuchirwa kubva pakutanga. Mushure mezvose, kutanga kuratidzwa kunopera - kunyangwe kune vangangove vashandi.
Paunofunga nezvezvinoitwa nevashandi veHR, chinhu chekutanga chinouya mupfungwa pamwe hukama hwevashandi. Izvi zvinogona kureva chero chinhu kubva pakubvisa kusanzwisisana pakati pezvikwata, kusvika pakuziva mihoro mitsva nedhipatimendi ravo idzva. Kusimuka kwe big data yakapa Software neruzivo rwainoda kugadzirisa mashandiro. Pakutanga paNew Gen Apps, takakurukura kuti sei big data uye Machine kudzidza inogona kushandiswa kugadzira Database kuchengeta mibvunzo yakajairika, senge mibvunzo pa siya mazano uye kubhadhara zvirongwa. Nenzira iyoyo, vashandi vane ruzivo rwese rwavanoda pamunwe wavo.
Zvinonyanya kukosha, zvisinei, ndizvo big data inogona kubatsira vashandi veHR uye maneja echikwata kukurudzira zvirinani zvevashandi masimba. Nekuyera kuita kwechikwata kutarisana neKPIs yekambani, mamaneja anogona kuona uko vashandi vangangove vachinetsekana uye kuita zvinoenderana. Izvi ndizvo zvinozivikanwa sekubatana analytics. Pamusoro peizvi, mamaneja anogona kuyera basa rechikwata vachipesana nemabasa ega ega evashandi uye kugadzirisa mutoro webasa zvinoenderana.
Maererano nekubatana, big data inogonawo kubatsira kukurudzira kujeka pakati pevashandi. Semuyenzaniso, mamwe makambani akatora kushandisa zvikumbiro zvekutevera kubatirana pamwe nemabasa, izvo zvinobvumira vashandi kuti vazvidavirire kune mapurojekiti avo. Nekuona maitiro ekugadzirisa, marekodhi ekupinda, uye mamwe ma metrics akafanana, vese mamaneja nevashandi vanowana pfungwa iri nani yemabatiro anoita munhu wega wega. Kuve nemapoinzi edata kune referenzi kunogona kukonzera kutaurirana kunoshanda uye kuvimbana pakati pevatambi vechikwata.
Mune chero sangano, kubatanidzwa kwevashandi ndiyo mafuta anoita kuti timu irambe ichimhanya. Pasina iyo, vashandi vanonyanya kutarisana nekusabereka uye kunyange kurega mabasa avo zvachose. Fortunately with big data, kubatanidzwa kwevashandi ikozvino chinhu chinogona kurondwa nekucherechedzwa.
Chinyorwa chiri paCio chinodonongodza kunyorera senge HigherGound, iyo inoita kuti vashandi vapinze manzwiro avari kuita. Nekuda kweizvozvo, mamaneja anogona kunongedza mapatani uye nzvimbo dzekunetsekana pakati pevashandi uye nekugadzira mhinduro maererano. Iyi sarudzo inosvikika zvakanyanya kana ichienzaniswa neyakajairwa nevashandi, sezvo vamwe vashandi vangangozvivanda panjodzi yekusimudza tsiye shoma.
Uyezve, kuongorora big data inogonawo kubatsira vashandi kuona mashandiro avo. Nekuona kufambira mberi kwavo kuchivakwa, zvinogona kubatsira kukurudzira vashandi. Mamaneja anogona kushandisa iyi data kugadzira ega ega hurongwa hwekukura kwevashandi vavo. Mentorship uye kukura kwese mukambani zvinhu zviviri zvinotariswa nevashandi vazhinji, uye analytics zvishandiso zvinogona kubatsira vashandi vepamusoro kuvapa.
Nekuti chikamu chebasa reDhipatimendi reHR ndechekushanda sepakati-poindi pakati pevashandi nevashandi vakuru, ndivo zvakare ndivo vanowanzo tarisira kuve vanochinja mukati memasangano. Izvi zvinoreva kuti vatariri veHR vakapiwa basa rekuona shanduko mukati mekambani inoenda mushe uye mushe sezvinobvira - kungave kubatanidzwa kana kutora, kugadzirisa, kana kugadzirisa kambani.
ne big data, HR haachafaniri kunyura mumamiriro ezvinhu aya asina kugadzirira. Nekusimudzira data yevashandi, vanogona kugadzira zvirongwa zvekudzidzisa zvemunhu kuti vaone kuti vanorerutsira mune chero nyowani set-up zvirinani.
Pamusoro pezvo, zviri kuna HR kutaura idzi shanduko kune vashandi. Uye kamwe kuita analytics vakaunganidzwa kubva mukati mekambani, mamaneja eHR anofanirwa kunzwisisa kuti shanduko yakarongwa ingakanganisa sei hunhu hwevashandi. Human Resources Director inosimbisa kuti kutaurirana kwakakosha panguva yekuchinja sezvo hunhu hwevashandi ndizvo zvinoraira kana shanduko yakatsanangurwa ichinyatso kubudirira. Maitiro uye maitiro ndizvo zvakare zvinotora kureba kuchinja.
Big data nokudaro zvinoratidza zvakakosha mumatanho ekuronga eshanduko, sezvo zvichibvumira mamaneja kuunganidza maitiro akanaka uye kugadzira nzira dzekudzikisa njodzi. Kupa mamaneja eHR kuwana iyi data, zvakare, inovabatsira kufunga nezve nzira yekuendesa ruzivo kuvashandi nenzira inoshanda uye inoshanda.
Vanoda rubatsiro neako big data kutanga? Batana